Gọọmentị Casino Online - Online Casino bonus codes
Online cha cha Daashi Codes > Ebe Ntanetị Ịntanetị Georgian
(945 votes, nkezi: 5.00 si 5)
Loading ...Georgia bụ otu n'ime obodo ole na ole na South Caucasus, ebe ịgba chaa chaa zuru oke. Ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na mba ahụ na-abịa n'oge NEP, mgbe ụlọ ịgba chaa chaa mbụ meghere na Tbilisi. Otú ọ dị, ha dị ogologo (afọ atọ) ma mee ka May 1928 gbanwee omume ya, mgbe a machibidoro ọrụ ịgba chaa chaa nile na mpaghara Soviet Union.
N'oge ahụ, ma ndị agbata obi toro toro, Russia na Azerbaijan, azụmahịa ịgba chaa chaa nọ n'ọnọdụ siri ike, Georgia nwere casinos na-emeghe ndị niile na-abịa. Ka o sina dị, nsogbu nke ịgba chaa chaa na karịsịa nsogbu ndị metụtara ịgba chaa chaa, na-ebili mgbe niile. Mba mgbe nile na-ekwu okwu n'etiti ndị omebe iwu na ụmụ amaala nkịtị banyere akụkụ ọjọọ nke ịgba chaa chaa.
Nchịkọta nke saịtị 10 Georgian Online Casino
Echiche zuru oke nke ndị mmadụ banyere ịgba chaa chaa na-eme nke ọma, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịgba chaa chaa dịka otu n'ime ihe omume ha kacha amasị. Otu ihe ọmụmụ na-adịbeghị anya gosiri na ndị Georgian bi na ịgba chaa chaa. Georgians ghọtara na casinos na-adọta nnukwu mba ọzọ dị oké mkpa, ya na ndị na-eme njem nleta na ya.
Ụlọikpe Gọọmenti na-ahụ ugbu a iwu iwu nke na-eme iji belata mmetụta ọjọọ nke ịgba chaa chaa. Ntube a na-akọ banyere njedebe nke ịnweta ụlọ ịgba chaa chaa na ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa ndị ọzọ nke obodo, na-atụle ụgwọ. A na-atụ aro ịhapụ ịgba chaa chaa naanị ndị amaala ndị ụgwọ ha ruru ma ọ dịkarịa ala 500 GEL, na ndị na-erughị 5000 GEL na akaụntụ akụ ha. A ka na-atụle ihe a.
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Georgia
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Georgia bụ iwu zuru oke. Akụkụ pụrụ iche nke mpaghara a na mba ahụ bụ eziokwu ahụ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ casinos nile nke ala nwere ebe ịntanetị ha. Ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa n'Ịntanet nke Georgia na-arụ ọrụ ọtụtụ ndị ọrụ obodo na ndị mba ọzọ, ebe ọ bụ na ọnọdụ maka ịnweta ikikere dịka iwu ịgba chaa chaa n'ịntanetị na Georgia dị mfe. Gwuo egwuregwu nke ịgba chaa chaa n'ịntanetị na Georgia nwere ike ịbụ klọb mmekọrịta pụrụ iche nke na-anọchi anya ụlọ ndị nwere kọmputa ejikọrọ na Ịntanetị ụlọ ọrụ casino online na mpaghara ndị ọzọ.
Georgians nwere mmasị igwu egwuregwu na casinos na klọb ndị dị otú ahụ, ma ugbu a, ọtụtụ ndị na-eji ngwaọrụ ha - kọmputa, ekwentị mkpanaaka na ihe ndị ọzọ.
N'oge na-adịbeghị anya, nzuko omeiwu Georgia tụlere ụzọ iji gbochie mgbasa ozi ịgba chaa chaa na mba ahụ. Ọ bụrụ na iwu ahụ ga-enweta ikike nke iwu, na mmachibido ga-emetụtakwa ịgba chaa chaa n'ịntanetị. Ọzọkwa, nkwenye ahụ na-enye ndị ọzọ nchịkwa siri ike maka ikere òkè n'ịgba chaa chaa nke ndị mmadụ n'okpuru afọ ole na ole, na iwu kachasị njọ maka mmejọ ọ bụla nke ndị ọrụ.
Georgia Online - Ịgba chaa chaa na Georgia
Georgia - bụ mba na-acha anwụ anwụ nke nwere ọdịdị mara mma na ọnọdụ dị mma maka ntụrụndụ na njem nleta. Akwukwo ndi mmadu na ndi mmadu ndi mmadu si n'uwa nile biara na obodo a. Ọnọdụ maka ịgba chaa chaa na usoro nhazi nke ala, na online na-enye ohere zuru ezu iji nwee mmasị na egwuregwu ahụ. Ma anyị ga-ekwu maka mgbe e mesịrị. Ya mere, CasinoToplists zigaara Tbilisi!
Casino na Georgia:
Akụkọ banyere ịgba chaa chaa;
Egwuregwu egwuregwu casino na ala na Georgia nwere ọnụnọ na Intanet;
Ndị Georgian na ndị na-ahụ maka mba ụwa nwere ma ọlị;
Ọ na-atụle ụgwọ iji nwetakwuo ohere ịnweta ego nke ndị ọrụ ntanetị n'ịntanetị;
Kedu otu esi egwu ụlọ ịgba chantanetị n'Ịntanet? Ntụziaka site na nkwụsị ụkwụ;
Ebe Georgia na akụkọ ihe mere eme nkenke;
Ebe nkiri Tbilisi;
Ezigbo mmasị banyere Georgia na Georgians;
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Georgia - akụkọ ihe mere eme
Tupu anyị akọwa ọkwa ịgba chaa chaa na obodo ugbu a, anyị na-enye akụkọ banyere ịgba chaa chaa na Georgia.
1801 - 1922 Georgia bụ akụkụ nke Alaeze Ukwu Russia ma soro ihe ndị ọ chọrọ maka ịgba chaa chaa. Na 1918, oge dị mkpirikpi nke nnwere onwe, na 1922, tinyere Armenia na Azerbaijan ghọrọ akụkụ nke Soviet Federative Socialist Republic nke Transcaucasian. Na 1920 na Tiflis nwere casinos 2 wee mepee ụlọ ọrụ ya maka mmepụta nke kaadị egwu. Nkeji edemede 235 nke Usoro Criminal nke GSPC megide nzukọ nke ịgba chaa chaa na - akwadoghị - ịgba mkpọrọ ruo afọ 3, na ike iweghasị ihe onwunwe.
1959 Tbilisi na-enye ntaneti racetrack. Ọtụtụ azụmahịa ịgba chaa chaa iwu na-akwadoghị.
1990 Ịgba chaa chaa na-enweta ọnọdụ iwu. Alakụba mbụ «Ori Juja» na Tbilisi.
1991 Georgia na-enweta nnwere onwe. Àgwà Sosbstvennoe banyere ịgba chaa chaa.
1992 Onye isi oche Zviad Gamsakhurdia nyere iwu mbụ "Ọ bụrụ na iwu nke lotteries na ịgba chaa chaa ndị ọzọ dị na Republic of Georgia mma." Ịnye ikikere nke cha cha.
1997 Ụtụ ego.
2000 Onye isi oche Eduard Shevardnadze nyere iwu ka ọ machibido ịgba chaa chaa. A jụrụ ọrụ ahụ. N'ebe a na Georgia na-arụ ọrụ karịa casinos 20, 18 ha nọ na Tbilisi.
2002 Iwu 1426-Sun "Na-adabere na ịnye ikikere na ikikere maka azụmahịa." Ọnọdụ ọhụrụ maka ịnye ikikere na ikike.
2003 Eduard Shevardnadze, gbalịrị igbochi ego ịgba chaa chaa, ma ọ bụ President Mikheil Saakashvili na-akwado 2004. Ọchịchị obodo ahụ dị na lotiri ahụ.
2005 Iwu № 1180 "Na nzukọ nke lotteries, ịgba chaa chaa na egwuregwu ndị ọzọ bara uru." Ọ na-arụ ọrụ ruo taa, na ọtụtụ mmegharị.
2014 Mba nwere ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa 94. Ụlọ ahịa na-emepe emepe na Tbilisi, Batumi na Kutaisi na-eso ya. E wezụga ụmụ amaala Georgian n'etiti ndị nduzi bụ ụmụ amaala nke Russia, Turkey, Armenia na United Kingdom.
2000 - 2017 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ casinos nile nke ala, nke nwere ikikere ikike, na-emepe ebe nrụọrụ weebụ ha na egwuregwu kọmputa. Egwuregwu ndị na-arụ ọrụ ụwa na-enweghị ohere.
(Ozi e si n'akwụkwọ ndị bụ Eugene Kovtun dere "Ntụle ahụ na mba ndị Soviet")
Kedu ụzọ nke azụmahịa ịgba chaa chaa n'Ịntanet?
O yikarịrị, na ogologo oge dị na Georgia, a ga-emepụta iwu iwu maka ịgba chaa chaa n'ịntanetị na ndị ọrụ si mba ọzọ. Ha bụ njikọ kachasị ike n'isiokwu nke ịchịkwa ịgba chaa chaa site na steeti. A ga-ejiri nlezianya nyochaa egwuregwu ha na ebe nrụọrụ weebụ na-elele ndị ha na-egwu maka afọ ole na ole, yana ịmepụta usoro iji merie egwuregwu ị ga-eji zavisimostyu- Gamblers.
Enwere cha cha ụlọ na Georgian? Chọọ ya na ntanetị n'ịntanetị. A machibidoro ịmepụta casinos n'Ịntanet n'enweghị ezigbo okwu nke ụwa na ikike ikikere n'ókèala Georgia. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ na Georgian ọrụ na Georgia enweghị cha cha nke otu aha - ọ bụghị iwu;
Ị nwere ike igwu egwu na ntanetị ọ bụla n'Ịntanet, nke nwere ikikere nke ya. Ọ dịghị emegide iwu ahụ. Agaghị egbochi ndị ọrụ ụwa, dị ka ihe atụ, na Russia Federation.
N'ezie, ị nwere ike igwu egwu n'ememe n'enweghị ikike, mana ị na-eme ya na ihe ize ndụ gị.
Nchikota: Onye nwere ike ịntanetị nwere ike ịhọrọ n'etiti casinos Georgia nke nọchitere anya na usoro ịntanetị na ndị ọrụ ụwa.
Kedu otu esi amalite igwu egwu n'Ịntanet na Georgia?
Họrọ otu cha cha n'Ịntanet . Kedu esi echebe onwe gị mgbe ị na-ahọrọ onye ọrụ mba ụwa? Jiri uru nke casinos anyị tụkwasịrị obi mee ihe. A na-ahụ ya na akuku aka nri.
Ọnọdụ mmụta . Nyochaa ozi niile na ebe nrụọrụ weebụ nke cha cha chantanetị (ọnọdụ ikikere nke nkwụnye ego na nkwụsị, nhọrọ na ụgwọ ma ọ bụrụ na nzaghachi sitere na cha cha chara (nkata weebụ, adreesị, nọmba ekwentị).
Gụọ nyocha ọkpụkpọ banyere akwukwo a na netwọk na netwọk. Cheta, ọ bụghị nyocha nile dị adị, a pụkwara ịhazi ya.
Okwu Ego . Kedu ihe ndị cha cha na-enye nhọrọ maka ịgbakwunye ma ọ bụ ịkwụsị ego? (Site na WebMoney, kaadị akwụmụgwọ na kaadị debit site na Visa, Yandex, wdg.) Gịnị bụ usoro iwepụ ego?
Ụdị egwuregwu . Kedu ụdị egwuregwu dị iche iche a na-enye, ụlọ cha cha a? Enwere ihe ga-adịrị gị na ịmasị?
Egwuregwu egwu . Mgbe ohere igwu egwu na akpa ule, gbalịa mee ya. Naanị "wrappers". Ya mere, ọ ga-edozi ma ọ bụrụ na igwu egwu na ma ọ dabara. Na mgbakwunye, na egwuregwu ụfọdụ, dị ka baccarat or keno adighi adighi nma iguta iwu na mbu. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị mụta banyere omume dịgasị iche iche na atụmatụ egwuregwu nke nwere ike inyere gị aka ịchịkwa ma jiri ego gị mee ihe.
Ebe Georgia na akụkọ ihe mere eme nkenke
Georgia dị na East East, o nwere ụzọ isi Oké Osimiri Ojii. Ndị agbata obi kacha nso dị nso bụ Russia, Armenia, Turkey, Azerbaijan.
Ugbua nke ugbua bu ndi mmadu bu ndi mmadu dika ebe a na puku iri abuo nke abuo BC Golden Afọ Georgia nọ n'ọchịchị nke Queen Tamara na XII-XIII narị afọ. Ruo mgbe gọọmentị ahụ mebiri oge ugboro ugboro, ọ na-abanye agha ahụ, agha na njikọta ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ihe ngosi ha ugbu a nwetara na 1918. Emesiri afọ na USSR.
Na 1991, mgbe ụda Soviet Union daa, Georgia ghọrọ onwe ya ọzọ, na 1992 sonyere United Nations. Taa, obodo a bụ ebe obibi mmadụ 4.5. Ọ bụ onyeisi oche Giorgi Margvelashvili na Prime Minista - Irakli Garibashvili.
Georgia na map nke Asia
Tbilisi ebe nkiri
Katidral nke Atọ n'Ime Otu nke Tbilisi . Nke a bụ aha nke Katidral Atọ n'Ime Otu na Tbilisi. Ebe: Georgia, Tbilisi, Elia Hill. Chọọchị Ọtọdọks na-eto eto, nke Archil Mindiashvili mere - otu n'ime ụlọ ndị mara mma nke Tbilisi.
Nerikala . Adreesị: Mount Mtatsminda na Tbilisi. Akụkụ kasị ochie nke ebe nchekwa ahụ dị na narị afọ nke anọ.
Azụ Uhie . Ebe: oke ugwu nke Mt Mtatsminda, 3 kilomita site na Tbilisi. Ebe ezumike mara mma, nke bụ ụgbọ ala ụgbọ elu.
Anchiskhati . Adreesị: st. Shavteli, 9, Tbilisi. Chọọchị Ọtọdọks Georgian kasị ochie na mba ahụ, na-esote narị afọ nke isii. Dị ka akụkọ si kwuo, e wuru ya ọbụna eze nke Iberia Villas Udzharmeli.
Keshvati . Adress: Shota Rustaveli, Tbilisi .. Chọọchị Ọtọdọks nke St George na mmalite narị afọ nke iri abụọ.
Ezigbo mmasị banyere Georgia na Georgians
Georgia - aha obodo, nke sitere na Arabic asụsụ. Aha onye aha ya bụ Sakartvelo.
Iberia - ọ bụ aha ókèala Georgia na III narị afọ BC. e. Taa bụ aha nke Spain, nke a abụghịkwa ihe mberede. Ndị nna nna Spaniards si Georgia bịa. N'ihe dị iche iche na Europe, asụsụ Basque yiri Georgian.
Asụsụ Russian adịghị ewu ewu na mba ahụ, a ghọtara na ọ bụ ndị okenye. Maka onye ntorobịa nke na-abụghị onye Russia ka aka mma na Bekee.
Na mkpụrụ nke ndị 1 nde mmadụ. Afọ 770, Georgia chọtara, yana ochie ochie, nke 34 puku. Ọtụtụ afọ.
Iwu nke ịgba chaa chaa na Georgia na-arụ ọrụ ego - otu pụrụ iche n'okpuru Ministry nke Finance. Ebumnuche ya bụ ịmepụta gburugburu ebe obibi na-enye aka n'ịzụ ahịa, yana ịmepụta ụtụ isi na ịgba chaa chaa.
Iwu ịgba chaa chaa nke Georgia dabeere n'ụkpụrụ abụọ bụ isi:
ichota ihe ziri ezi na imeghe nke ulo oru;
nchedo ụmụaka na ndị na-adịghị ike site na nsogbu, nke nwere ike ime ka ịgba chaa chaa.
Ịhazi ịgba chaa chaa na Georgia, onye ọchụnta ego nwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ karịa akụkụ ọrụ gụnyere cha cha, igwe oghere, egwuregwu table, ịkụ egwuregwu, bingo, lotto na lotteries. Nkwekọrịta, yana ụkpụrụ na njikwa nke ndị na-ahazi ịgba chaa chaa na-eburu Ọrụ Ego (Ụtụ Isi na Ụlọ Ọrụ Nchịkwa).
Site na iwu, ikike nile nke imeghe ịgba chaa chaa na Georgia nwere ike nweta ya n'ụdị eletrọniki, ọ dịghị mkpa ịga gọọmenti ego. Akwụkwọ ahụ dị irè maka afọ ise maka Ụlọ Nzukọ Ụlọ Igwe cha cha, ụlọ ọrụ ịkụ nzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na bingo ma ọ bụ bingo, na otu afọ n'ihe banyere lotteries. Ụlọ ọrụ ndị natara ikike maka cha cha ma ọ bụ mkpọda, nwere ike ịrịọ akwụkwọ ahụ iche iche maka ịgba chaa chaa desktọọpụ. Ọ ga-adị irè ruo oge ahụ wee bụrụ isi mkpebi.
Casino na Georgia: Ụtụ isi
Iwu na-enye maka ịgba chaa chaa dị iche iche kwa afọ na nke ọ bụla. Kwa afọ maka ikikere - ọ bụ ego a na-akwụ ụgwọ na ụgwọ nha anya n'otu oge. Ugboro anọ na-agba ụgwọ ugboro anọ n'afọ maka ihe ọ bụla eji agba chaa chaa. Ọnụ ego ha dịgasị iche dabere na ịgba chaa chaa na mpaghara ebe ụlọ ọrụ dị.
Ọnụahịa dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ndị a na-emetụta ọnọdụ nke ụlọ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, ụtụ isi na Tbilisi, karịa karịa n'ebe ndị ọzọ, mana mmasị ịgba chaa chaa dị elu. Maka ikike imeghe cha cha ebe a na Georgia ga-akwụ GEL 5 nde otu afọ na nkwụsị -. GEL 1 nde Onye nwe ụlọ ala ahụ na-emeghe ịmeghe atọ n'ime egwuregwu egwuregwu klọb na-enweghị ụtụ isi ọ bụla kwa afọ na mpaghara ahụ, maka igwe mposi - otu ụlọ.
A na - akwụpụ ụfọdụ casinos Georgia ka ha ghara ịkwụ ụgwọ kwa afọ. Na Batumi, Kobuletti, Khelvachauri, Anaklia na Ganmukhuri enweghị ike ịkwụ ụtụ isi, na-ewu site na 80 gaa na 100 ụlọ nkwari akụ dị nso. Na mpaghara Gudauri, Kazbegi, Bakuriani, Tskaltubo na Sighnaghi casino nwerere onwe ya kpamkpam na ya. Na foto a na-acha anụnụ anụnụ na-egosi ụlọ ọrụ ndị na-enweta uru maka 100 + wuru ụlọ, uhie - ụlọ 80, green - na ọnọdụ niile.
Ọrụ ego ga-akwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ ịgba chaa chaa:
ụtụ na ego onwe onye (ụgwọ ọrụ) - 20%;
ụtụ ụlọ - ruo 1%;
Ụtụ isi ụtụ isi - 15%;
ụtụ maka ibu ọrụ, nke a na-eme n'oge mmegide - 20%.
Egwuregwu desktọọpụ nke klọb, oghere ụlọ ọrụ na egwuregwu na-ewepụta ọrụ iji wụnye ndekọ ego maka ọnụego ndekọ. Ha ga-eji ha ma ọ bụrụ na ịnye ọrụ ndị ọzọ, dịka ịzụ mmanya ma ọ bụ nri.
na-enye oge maka azụmahịa ere ahịa na Georgia - 20 ụbọchị. Ị nwere ike nweta ya n'efu. Ọ bụrụ na achọrọ akwụkwọ ahụ ngwa ngwa, ọ ga-ekwe omume ịkwụ GEL 400 ($ 160) - ọ ga-adị njikere n'ime 10 ụbọchị, GEL 800 (320 $) - 5 ụbọchị ma ọ bụ GEL 2 puku ($ 800.) - maka ụbọchị 1.
Georgia Casino Online
A naghị enye ikike nkewa maka nzukọ nke casinos n'Ịntanet, ebe ọ bụ na ọrụ ndị dị otú ahụ nwere ike ịbụ ndị nwere ezigbo ụlọ ọrụ na ikikere. Ha nwere ikike ịchịkwa saịtị ahụ na cha cha, nkwụsị, ịkụ nzọ egwuregwu na ihe nkiri ịgba chaa chaa. Ndị asọmpi mba ọzọ ha anaghị atụ egwu - na ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ na-akwado iwu ịgba chaa chaa na Georgia.
Dika nsonaazụ nke oru nke ebe di iche iche na-akwụ ugwo ugbo ato. Ogologo ochichi obodo ha kpebisiri ike ha. Ọ dị iche n'etiti 30-60 puku GEL. ($ 12-24 puku.). Tụkwasị na nke a, ụtụ ụtụ ndị ọzọ e depụtara n'elu.
N'ebe a na Tbilis nyere 3 ikike Batumi - 11 (anọ n'ime ha ụlọ ọrụ ndị wubere ụlọ nkwari akụ n'oge na-adịbeghị anya) na Tshaltubo - 5 na Kazbegi - 1. Ya mere, ụlọ igwe ntanye 72 na-arụ ọrụ na iwu ndị na-egwu egwu Georgia 107 ụlọ ahịa ịkụ nzọ, ụlọ ọrụ 3 bingo ma ọ bụ lotto, 41 na 3 lotrị ịgba chaa chaa.
Maka ozi niile nyere akụkọ akụkọ bụ Theon Shiukashvili - ọrụ nlekọta ọrụ nke Georgia. O rụrụ na egwuregwu Georgia Congress dị ka onye ọkà okwu, ọ nwere afọ iri na ahụmahụ na ndị isi obodo ụtụ isi ma na-ahụ maka ịnye ikike maka nhazi ịgba chaa chaa na Georgia.
N'ịbụ onye nwere onwe ya, Georgia ejiriwo aka ya kwalite ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa. Ọnọdụ dị mma nke obodo, enweghị iwu iwuchibido ịgba chaa chaa, yana ịkwado ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa site n'aka ọtụtụ ndị agha ndọrọ ndọrọ ọchịchị, obere nrụrụ aka, ike nke ịzụ ahịa, ọnọdụ dị mma nke ụtụ isi na-enye ịgba chaa chaa Georgia ọtụtụ uru.
Iwu Georgia ugbu a na-akwado ụdị ịgba chaa chaa niile. N'etiti ndị bụ isi - ụlọ cha cha, azụmahịa akwụkwọ (gụnyere ịkụ nzọ), ịgba chaa chaa, ogige ígwè ọrụ, ụlọ ịgba chaa chaa. N'okpuru weebụ, iwu na-enye ohere ịnye ụlọ cha cha, ịkụ nzọ na oghere igwe.
Akụkụ nke nzukọ nke ịgba chaa chaa na Georgia bụ na usoro ngwaọrụ-egwuregwu kọmputa ga-enwe ezigbo ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa (ala).
Ịgba ụgwọ ịgba chaa chaa na Georgia bụ iwu ndị a:
Iwu Georgia "Na nhazi nke lotteries, ịgba chaa chaa na egwuregwu bara uru" site na 25.03.2005 №1180;
Iwu Georgia na "ikikere na ikikere" nke e dere 24.06.2005 №1775;
Iwu Georgia "Na ikikere ikikere na ụgwọ ikike" sitere na 12.08.2003 №2937;
Iwu Georgia "Na nchịkọta ịgba chaa chaa" sitere na 29.12.2006 №4250;
Ụkpụrụ Iwu Georgia nke sitere na 17.09.2010 №3591;
Nkwonkorita nke Minista nke Ego na Minista nke N'ọnọdụ Georgia "N'akwere iwu maka ndị nwe nyocha arụmọrụ kwere ịgba chaa chaa na egwuregwu ndị ọzọ bara uru" site na 14.12.2011 №611-1013;
Iwu nke Isi nke Ọrụ Nlekota Ego nke Georgia "On Approval of the Regulation" Na usoro na ọnọdụ maka inweta ihe ọmụma, nhazi ya, ọrụ nchịkwa nke Georgian Financial na nhazi site n'aka ndị nhazi lotteries, ịgba chaa chaa na egwuregwu ndị ọzọ bara uru "Na" Site n'usoro na ọnọdụ nke ịnweta ozi ahụ, usoro nhazi ya, nlekọta ego nlekota ọrụ nke Georgia na ntinye site na cha cha cha "site na 28.07.2004 №94.
Ọnọdụ maka inweta ikike
Na Georgia, usoro na-eguzosi ike n'ihe na ihe dị mkpa maka inweta akwụkwọ ikike (ikike) maka nzukọ na ịme ịgba chaa chaa.
Nweta ikike ikike aha ụlọ ọrụ aha na Georgia, ndị nwe ụlọ ọrụ ndị a nwere ike ịbụ ụmụ amaala nke Georgia na ndị mba ọzọ.
Ịnye ikikere maka ịgba chaa chaa na-eburu ọrụ ego nke Georgia. Onye nyere ya ga-edozi akwụkwọ ndị dị mkpa n'ụdị nyocha na enyemaka nke ibe weebụ IRS.
Ntụle nhazi na-ahọrọ oge nnyefe nke akwụkwọ ahụ dabere na setịpụrụ iwu maka ụbọchị 1 - GEL 2 puku / $ 830, 5 ụbọchị - GEL 800 / $ 330, 10 ụbọchị - GEL 400 / $ 365, ọrụ 20. ụbọchị - n'efu.
Ndepụta nke akwụkwọ achọrọ iji nweta ikikere, zuru ezu ma dabere n'ụdị ịgba chaa chaa kpọmkwem.
Nkwekere nke na-enye ikike iji hazie ịkụ nzọ, lotrị, ịgba chaa chaa nkwalite na-enyefe na Ọrụ Georgia Revenue Service:
otu wepụ si n'Akwụkwọ Ndenye;
akwukwo nke kwadoro ụgwọ ego ịkwụ ụgwọ;
nkwekọrịta n'etiti onye nyere ya na onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke na-emepụta egwuregwu tiketi tiketi (ma e wezụga egwuregwu, nke a haziri n'usoro usoro kọmputa), na-egosi ọnụọgụ tiketi;
ọnọdụ (ụkpụrụ) nke nzukọ egwuregwu bara uru;
akara tiketi egwuregwu ndị bara uru (ma e wezụga egwuregwu, haziri na ụdị usoro kọmputa);
n'ihe banyere nzukọ nke ịkụ nzọ - akwụkwọ nke kwadoro inye onyinye ego a na-agbata n'ọsọ bụ ihe na-erughị 10 puku GEL / $ 4, 15 puku.
n'ihe gbasara nzukọ nke nhazi na usoro nke kọmputa (egwuregwu ntanetị) - usoro nke egwuregwu-egwuregwu kọmputa, nke a ga-akọwapụtara: ezigbo adreesị nke ga-ejikwa egwuregwu bara uru na nzukọ ha, ndepụta na akụrụngwa nke egwuregwu, ebe (s) na oge imecha maka ụgwọ, ozi banyere igbochi egwu na ndị nọ n'okpuru 18 afọ.
Iji hazie ma na-eduzi egwuregwu nke ohere na Intanet (online) maka onye nhazi egwuregwu ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ikikere maka "ala" nke egwuregwu ahụ (offline). Mgbe ị natara ikike maka egwuregwu ahụ na-anọghị n'ịntanetị, onye nwe ikikere a nwere ikike itinye akwụkwọ na Revenue Service nke Georgia maka ikikere iji mepụta egwuregwu n'ịntanetị na ndokwa nke ndepụta nke akwụkwọ.
Ikike maka itinye aka na mmemme maka nzukọ na omume nke ịgba chaa chaa na Georgia dị irè maka afọ 5.
A na-akwụ ụgwọ maka ịkwụsị ikikere maka nzukọ ịgba chaa chaa na Georgia n'otu afọ. Nke mbụ, onye ahụ nyere ụgwọ maka afọ mbụ nke ọrụ, mgbe ahụ, kwa afọ na-eme ka ikikere ahụ dị ọhụrụ site na iji ụgwọ ọzọ.
Ụgwọ maka akwụkwọ ikike ahụ dabeere na ọnọdụ nke ọrụ na ịgba chaa chaa.
Ụgwọ maka ikike maka ịhazi ịgba chaa chaa na Georgia
Ego kachasị ụgwọ maka ikike maka ịme ihe ịgba chaa chaa na-eme ka ndị mmadụ na-ahazi ụdị azụmahịa a n'ógbè. Ebumnuche a bu maka mmepe nke oru ndi njem njem Georgia.
Ya mere, casinos na ịgba chaa chaa ndị ọzọ nọ n'obodo obodo ndị dị na obodo (Borjomi, Batumi, Kobuleti) nwere uru dị ukwuu n'ịtọ ntọala ụlọ ọrụ ahụ maka ikike ịzụ ahịa.
Karịsịa, ọnụego kwa afọ nke ụgwọ maka ikike ịhazi cha cha na Batumi bụ 250 puku GEL / $ 103.6, ma na Tbilisi - .. GEL 5 million / $ 2 072 250. N'okwu a, ọ bụrụ na onye nnata ahụ nwere ikikere ịhazi chakpo na Batumi na-etinye ụlọ ọrụ ahụ n'ókèala nke ụlọ ahụ ọ wuru ọhụrụ na ọnụnọ nke ụlọ 100, a naghị akwụ ụgwọ maka ikike na 10 afọ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-enye ikike n'efu na ụlọ ọrụ casino Kazbegi mpaghara mpaghara, Tskhaltubo, Sighnaghi.
Ọnọdụ dị ka ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ahụ maka ikike iji dọọ ụdị ịgba chaa chaa ndị ọzọ (lotteries, ịkụ egwuregwu, ịgba chaa chaa). Dịka ọmụmaatụ, ego maka ikike iji hazie onye na-ede akwụkwọ na Tbilisi bụ GEL 200 thousand / US $ 8.3 puku kwa afọ, ebe ọ bụ na mpaghara nke nhazi nke Batumi, Kutaisi, Rustavi - ... 80 puku GEL / $ 33.2 puku . n'afọ.
Na mgbakwunye na ego kwa afọ maka ikike nke ịgba chaa chaa, isiokwu nke ọrụ ndị a na-akwụ ụgwọ ego nhazi, a na-ekpebi ego ahụ na-adabere na ụlọ ọrụ ahụ na ọnụ ọgụgụ nke otu ụzọ n'ụzọ anọ:
ya na igwe nke ọ bụla - GEL 1,5-3 puku.
ya na okpokoro chal ọ bụla - GEL 15-30 puku.
na okpokoro ịgba chaa chaa ọ bụla - GEL 3-10 puku.
site n'egwuregwu ọ bụla n'usoro usoro-ụdị kọmputa - GEL 30-60 puku.
tinyere akwụkwọ ego ọ bụla ma ọ bụ ihe bara uru maka egwuregwu cha cha chaa na kọmputa, nke dị n'èzí ihe a haziri ahazi, dịka mkpebi ahụ, maka egwuregwu nke ohere ma ọ bụ uru - GEL 1-1,5 puku.
na ntinye nkwado ọ bụla - 10% nke ọdọ mmiri nrite.
A na-edozi ụgwọ n'ime ụlọ ọrụ a na-achịkwa.
Onye njide nke akwụkwọ ikike ahụ, nke na-adịghị arụ ọrụ nkwekọrịta n'ụzọ ziri ezi nyere iwu ka ọ bụrụ ihe dị mma na isi ihe dị mkpa iji mee ka ọrụ ya kwekọọ na ikikere enyere, n'ime oge nke ahụ nke nyere ikike ahụ. Ụdị GEL dị iche iche dị otu puku. ka 10 puku. / $ 415-4150.
Ọ bụrụ na onye njide nke ikike ahụ, bụ nke e setịpụrụ iji mee ka ọ banye n'ikike na-enye ikike iji mezuo iwu a, emezughị iwu a, ọ na-etinye ntaramahụhụ abụọ n'ime ọnụọgụ atọ. Ọ bụrụ na mgbe njedebe nke njedebe oge ahụ, na nke abụọ nke ọbịbịa nke ụbọchị ọma, onye nwe akwụkwọ ikike adịghị emezu ọnọdụ nke ikike, ọnụọgụ ego ahụ dị atọ. Ọ bụrụ na onye njide nke ikike ahụ agaghị eme ka ọnọdụ ikikere, ị ga-eme mkpebi na ịkagbu ikike.
Ọ bụrụ na isiokwu nke ịgba chaa chaa achọghị n'afọ ọzọ ka ị gaa n'ihu na ọrụ ndị na-atụ anya mkpebi, ọ ga-ezuru maka ụbọchị 5 ụbọchị ahia tupu njedebe nke ịkwụ ụgwọ kwa afọ iji gwa ndị ọrụ ntinye ego nke ụlọ, nke ga-eme ka ikike ahụ gharazie.
Usoro nke ndị na-achịkwa ọrụ
Ndị isi gọọmentị nke nyochaa njedebe nke ikike nke ndị nwe ịgba chaa chaa chọrọ ka ha nweta ọnọdụ ikikere, bụ ọrụ ego ntinye aka nke Georgia, Georgian Ministry of Internal Affairs and Financial Monitoring Service of Georgia.
N'ime ike ya, ndị nlekọta ahụ ga-ahụ ma tinye usoro nzaghachi nhazi maka imebi ihe ndị ịgba chaa chaa na-achị. Ihe a na-emekarị bụ ịlele Ọrụ Ego Maka Ọrụ gbasara ịkwụ ụgwọ ụtụ isi kwesịrị ekwesị. Ozi ime obodo na-achịkwa mmezu nke iwu chọrọ gbasara ngwaọrụ dị na ụlọ ọrụ ọ bụla maka nyochaa. Na-enyochakwa ịkwado ihe ndị ọrụ chọrọ gbasara nkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ (ọ bụrụ na a manyere ha iwu). Otu ihe dị mkpa bụ ịnweta ule nke ịgba chaa chaa egwuregwu egwuregwu na ụgwọ maka ọnụego mmasị, nke iwu kwadoro. Ọ bụrụ na e guzobewo mmebi dị otú ahụ, onye na-ejide ikike maka nzukọ ịgba chaa chaa ga-akwụ ụgwọ dị mma. N'ihe banyere nlọghachite nke mmebi iwu a, ọ ga-ekwe omume ịwepụ ya na njikwa ọrụ ịgba chaa chaa.
Ụtụ ịgba chaa chaa
Georgia - obodo nke nwere iwu ụtụ isi nke doro anya na nke a na-ahụ anya, yana ibu arọ ụtụ isi.
A na-atụle ọrụ na-ede akwụkwọ na Georgia na ụzọ ọ bụla onye ọrụ ọ bụla nwere ikikere iji kụziere ụdị azụmahịa a, na-akwụ 5% VAT ọnụahịa ego. Ụtụ ụtụ isi a abụghị ihe dị oké egwu maka onye nwe akwụkwọ ikike ahụ. Otú ọ dị, ndị nnọchianya nke azụmahịa na-azụ ahịa na-achọ iche na ihe kacha mma bụ ụtụ nke 15-20% nke nnukwu ego ịgba chaa chaa.
Arụmụka bụ ọnọdụ na ịtụ ụtụ isi ọrụ ndị ọzọ na ịgba chaa chaa (casinos, lotteries, na ihe ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ azụmahịa na-akwụ ụtụ isi na ọnụego nke 15% nke ego efu nke ọrụ ya. N'ihi ya, ha nọ n'otu ọnọdụ ahụ dị ka ụlọ ọrụ azụmahịa ndị ọzọ na mpaghara Georgia - ndị ahụ bụ ọrụ ndị na-enweghị njikọ na ndokwa na ọrụ ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa.
Ihe gbasara ịgba chaa chaa
Nkeji edemede 35 nke Iwu Georgia "Na nhazi nke lotteries, ịgba chaa chaa na egwuregwu bara uru" na-akwalite ọtụtụ ihe mgbochi maka ikike onye nwe ya na-eduzi ịgba chaa chaa. Dịka ọmụmaatụ, akwadoghị ịgba chaa chaa na egwuregwu bara uru (ma e wezụga ịgba chaa chaa), yana ire ere / nkesa nke tiketi ịgba chaa chaa, ịgba chaa chaa na egwuregwu bara uru (ma e wezụga tiketi tiketi nkwado) na ụlọ ọgwụ na ụlọ akwụkwọ ụmụaka, ụlọ nke efe ofufe, ụlọ akwụkwọ ụmụaka, ụlọ akwụkwọ ọdebe, ụlọ ihe ngosi nka, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke obodo na ndị nwe obodo, yana ebe ndị ọchịchị obodo machiri.
A machibidoro ịbanye na ịgba chaa chaa ndị na-erubeghị 18 afọ, na igwu egwu na ụlọ ịgba chaa chaa bụ 21 ncheta.
Usoro ọzọ maka ọrụ nke ndị ọrụ nke ịgba chaa chaa bụ iji chịkwaa ego ole ndị na-eso ya na-eji ịgba chaa chaa, site na Ọrụ Nlekota Ego na Georgia. Onye ọ bụla na-ahazi nke egwuregwu nke ohere ga-agwa ndị nnọchiteanya nke ndị na-eje ozi, na-anọ na ịgba chaa chaa karịa GEL 3 puku. / $ 1243 kwa ụbọchị. Ọrụ maka inyeghị onye ọrụ ahụ ozi a nwere ike ikpebi na GEL si na 2-6 puku. / $ 830-2490. Ekwesiri iburu anya bu ihe okike nke nlekota oru nlekota ego nke ihe a na-akpo oke akwukwo - ndepụta nke ndi mmadu ndi a machibidoro itinye aka na onu ogba chaa chaa n'ugwu Georgia. Ndepụta a gụnyere ndị nnọchianya nke òtù dị iche iche na-eyi ọha egwu na ndị omempụ.
Ruo ọtụtụ afọ na Georgia, enwere mkparịta ụka gbasara mkpa ọ dị ịgbochi mgbasa ozi ịgba chaa chaa na telivishọn, redio na mgbasa ozi ndị ọzọ. Ma ugbu a echiche banyere mmetụta ọjọọ nke mgbasa ozi dị otú ahụ adịghị achọta nkwado maka ọnụ ọgụgụ mmadụ dum.
0.1 Nchịkọta nke saịtị 10 Georgian Online Casino
2.1 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Georgia
3 Georgia Online - Ịgba chaa chaa na Georgia
3.0.1 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Georgia - akụkọ ihe mere eme
3.0.2 Kedu ụzọ nke azụmahịa ịgba chaa chaa n'Ịntanet?
3.0.3 Nke ahụ n'ezie iwu ndị a pụtara maka onye ọkpụkpọ ahụ?
3.1 Kedu otu esi amalite igwu egwu n'Ịntanet na Georgia?
3.1.1 Ebe Georgia na akụkọ ihe mere eme nkenke
3.1.2 Georgia na map nke Asia
3.1.3 Tbilisi ebe nkiri
3.1.4 Ezigbo mmasị banyere Georgia na Georgians
3.2 Casino na Georgia: Ụtụ isi
3.3 Georgia Casino Online
3.4 Ọnọdụ maka inweta ikike
3.5 Kwenye ụgwọ
3.5.1 Ụgwọ maka ikike maka ịhazi ịgba chaa chaa na Georgia
3.5.2 nlekọta ụlọ ọrụ
3.7 Usoro nke ndị na-achịkwa ọrụ
3.8 Ụtụ ịgba chaa chaa
3.9 Ihe gbasara ịgba chaa chaa